Sailing in Yangon - Yangon Thu Michelle Video
Sailing in Yangon
Activities, Places and landmarks, Video Jun 22, 2018
ဒီတစ်ခါ video ခေါင်းစဉ်က Sailing in Yangon တဲ့။ ရန်ကုန်သူမီရှဲက အင်းယားကန်မှာ ဘုတ်လှော်ခဲ့တယ်။ အစက ရွက်လှေလွှင့်တာ နဲ့ လှေလှော်တာနဲ့တောင် သိပ်မသဲကွဲဘူး။ အကုန်လုံးကတော့ ရေထဲမှာလုပ်တဲ့ အားကစားနည်းပဲလေ… နော့။ ဒီ ဗီဒီယိုရိုက်တော့မှ မတူမှန်းသိတယ်။ အခုကျတော့ ပထမဆုံးစစီးတာဖြစ်တဲ့အတွက် Stand Up Paddling (SUP) ကိုပဲလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ရေကူးတတ်တော့ ရေတော့ မကြောက်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုကန်မျိုးမှာ တစ်ခါမှ မကူးဖူးတဲ့အတွက် ရေထဲမဆင်းခင် လူက ဒူးတုန်နေတာ။ ဆရာမ မခင်ညိုလင်းက သေချာသင်ပေးပြီး ဘေးက လိုက်လှော်ပေးနေတော့ စိတ်သက်သာရာရတယ်။ စိတ်ချရတယ်။ သက်ကယ် အင်္ကျီတောင် မဝတ်ဖြစ်ဘူး။
လှေလှော်ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးက တခြားလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်သလိုုပဲ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေတယ်။ မတူတာက ရေထဲရောက်သွားရင် တစ်ယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးရပြီး လုပ်နိုင်သွားရင် ယုံကြည်မှုတိုးစေတယ်။ ဘယ်လိုခံစားချက်လဲဆိုတာ စမ်းကြည့်မှ သိလိမ့်မယ်။ ကမ်းက ခွာပြီးစလှော်တာနဲ့ ကမ်း ပြန်ကပ်တဲ့ အချိန်အတောအတွင်း ကန်ထဲမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ … ကားသံ လူသံနဲ့ဝေး …. လှိုင်းသံနဲ့အရမ်းသာယာတယ်။စိတ်လဲတော်တော်အနားရတယ်။ကမ်းပြန်ကပ်ဖို့ကလည်းတော်တော်အားထုတ်ရတယ်။
ရွက်လှေအသင်းဝင်ဖို့ အသင်းသား ထောက်ခံချက်ပါမှ အသင်းဝင်လို့ရမယ်။ (လျှာခလုတ်တိုက်လိုက်တာ ..) အသင်းဝင်မဟုတ်ဘဲနဲ့လည်း လာလှော်လို့ရပါတယ်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်ကိုတော့ Yangon Sailing Club မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကော့မန့်မှာ ပြောထားပေးမယ်။
အသစ်အသစ်တွေ စမ်းလုပ်ကြည့်ရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်။ ကိုယ့်အတွက် အန္တရာယ်မများဘဲ လုံခြုံစိတ်ချရတယ်ဆိုရင် စမ်းကြည့်ဖိုု့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော် …
More activity you can do in Yangon is Yachting. It’s fun and relaxing. I tried stand up paddling (SUP). Address is 132, Inya Road, Kamayut T/S (4.33 mi) Yangon 1104. Ph: +959 253 558 239
Yangon Sailing Club is established in 1924, this sailing club opens its doors to non-members on Friday nights when it’savery pleasant lakeside spot for drinks. Temporary membership, which will allow you to do some sailing, is K10,000 per day or, with boat hire, K5000 per hour according to Lonely planet data.
This is very excited moment and new experience for me. I enjoyalot and having fun. I think I will do it again.